नायिका केकी अधिकारीको आज जन्मदिन, कति बर्षकी लागिन् उनी ? – " सुलभ खबर "
नायिका केकी अधिकारीको आज जन्मदिन, कति बर्षकी लागिन् उनी ?
काठमाडौं – चर्चित नायिका केकी अधिकारीको आज जन्मदिन परेको छ । आजबाट उनी ३१औं बर्षमा लागेकी छिन् । २०४६ साल पौष २ गते जन्मिएकी केकी अघिकारीलाई हिजोदेखी नै शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । नेपाली विकिपिडिया अनुसार उनको जन्मदिन १९८९ डिसेम्बर १७ तारिखका दिन रहेको छ । तर उनको जन्मदिन आज पनि मनाइएको छ । केकी पढेलेखेकी र सुशिल नायिकाका रुपमा परिचित छिन् ।
२०१० मा स्वोर चलचित्रबाट नेपाली चलचित्रमा प्रबेश गरेकी केकी अहिले चलचित्र र म्युजिक भिडियोहरुमा ब्यस्त छिन् । पछिल्लो समयको उनको चलचित्र छ माया छपक्कै ले उनी निकै चर्चामा आइन् । यसै चलचित्रले उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याएको छ । अहिले उनी नयाँ चलचित्र झिङगेदाउको शुटींगमा ब्यस्त छिन् ।
केकी र आंचल बने जेठानी- देउरानी, तारिफ र झगडासंगै प्रेमीको कुराले लियो यस्तो मोड
काठमाडौ । केकी अधिकारी र आंचल शर्मा एकसाथ चलचित्र झिँगेदाउमा देखिने भएका छन् । देउरानी झेठानीको भूमिकामा यी दुई अहिले चलचित्रको शुटिङ्ग धमाधम गरिरहेका छन् ।
ज्ञानेन्द्र देउजाको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्रमा आंचल र केकी देउरानी जेठानीको रोलमा देखिने हुँदा यस चलचित्रको चर्चा चुलिंदो छ । यी दुईको लुक्स सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भए संगै दर्शकहरु माझ कौतोहुलता पनि बढ्दो देखिएको छ । आंचल र केकीले समेत चलचित्रमा संगै काम गर्दाको अनुभव साट्दै भने: “एक अर्काबाट जीवन जिउने धेरै कुराहरु सिक्दै समेत छौ ।”
अभिनेत्री आँचलले पहिलो पटक यस चलचित्रमार्फत गाउँमा बस्ने एक विवाहित महिलाको भूमिका निभाउदैछिन् । त्यस्तै केकी अधिकारी पनि गाँउले महिलामा देखिदैछिन् । यस चलचित्रको छायांकन अहिले भकुन्डेबेसीमा भइरहेको छ । यस चलचित्रमा अभिनेत्री केकी अधिकारी जेठानी दिदी बन्ने र आँचल शर्मा देवरानी बन्ने चर्चा छ ।
ऋषि कपूरको विवाहमा पुगेकि रेखाको सिउँदोमा सिन्दूर, अमिताभमाथि शंका
काठमाडौं । महानायक अमिताभ बच्चनको चर्चासँगै एक बिषयमा भने कुरा काटिने गरिन्छ । फिल्म जगतमा
अमिर खानको छोरीले आफ्नो जिवनको बारेमा गरिन् यस्तो खुलासा (भिडियोसहित)
अभिनेता आमिर खानकी छोरी इरा खानले सामाजिक संजालमा एक भिडियो सार्वजनिक शेयर गरिन् । त्यो
अवतारको आकाश रुन्छ गित ले चुम्यो तीन अवार्ड
सर्बोकृष्ट लोकदोहोरी गित आकाश रुन्छ मोडेल को बिधा बाट अबतार शाक्य ले हालै नेपाली आर्ट
बलिउड जगतमा अभिनेत्रीहरु चलचित्र बाहेक उनीहरुको विवाहका कारण पनि चर्चामा हुने गर्दछन्। बलिउडमा यस्ता अभिनेत्री
बलिउडका चर्चित नायक सलमान खान हुन् । उनकाे चर्चा बलिउडमा मात्र नभइ बिश्वभर रहेकाे छ
ऋषि कपूर र नीतूको विवाहमा पहिलोपटक सिन्दुर लगाएर पुगेकी थिइन् रेखा
एजेन्सी – बलिउडकी सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज ६६ औँ जन्मदिन मनाइरहेकी छिन् । संसारका सुन्दर